Hevitra MPANOHARIANA | Desambra 2009 | 2
Isaia mpaminany milaza ny zavamisy ankehitriny
2009-12-05 @ 09:51 in Ankapobeny
Ankamantatra mampihomehy ihany aloha hanombohana indray ity resaka mahafinaritra ity. Ahoana ny fomba hampidirana olona efatra ao anaty videoconference? Valiny: Mialoha ny hanaovan'ny olona telo conférence dia manao video aloha ny iray. Ka ny fiteny mahazatra ny olona eto Dago dia hoe cinema cinema fa ny fantatry ny sarambambem-bahoaka aloha dia video no mora kokoa ny mijery aminy na dia mahatsemboka mampanara- pofona aoka izany aza ao anatiny. Olona tsy mba misaika na mandro manko matetika no tena mijery video eto amin'ny tanàna koa. Fa ny video tamin'ity indray mitoraka ity tsy naseho ny fiara sy ny diam-bala fa resahina am-bava fotsiny. Mba ahoana tokoa ary izany? Niandry ihany ny tena fa he-e-eh niandry vasoka. Misy ihany ireo nanamarika fa nandeha izany ny video resaka baomba sy fanafihana isaky ny handeha amin'izany tanàna antsoina hoe Maputo dia nivadika kely indray ho tifitra tsy henon'ny olona tany amin'ny toerana nolazaina ho nisian'ny trangan-javatra indray no tantaraina.
Fa ny mahavariana amin'ny fomba fitantarana dia ny teo anilan'ny saofera no nokendrena fa tsy ny olona tamin'ny fiara. Izany hoe, hevitro ity, tsy nisy fikendrena an'Ilaikely akory ny tifitra na dia atao hoe nisy aza io trangan-javatra io. Raha ny filoha Ravalomanana dia azo heverina tsara mihitsy ho mipetraka amin'ny seza aloha raha ao anaty fiara fa tsy mbola nahita an'Ilaikely hipetraka amin'ny seza aloha loatra aho. Mazava loatra fa nitovy tanteraka ny hevitro sy ny hevitry ny filoha Ratsiraka. Ny manahirana dia efa nahateny ny azy mialoha ny hamoahako ny hevitro tamin'ny bolongana ny filoha Ratsiraka dia manjary heviny iny, mialoha ny hevitro. Azoko heverina ihany ao anatin'izany fa mba manana fahatakarana tetipanorona tahana ny miaramila manana grady amiraly ihany hay izaho ity. Izany hoe heveriko fa paikan'izy samy ao anatin'ny ankolafy ihany io kitifitifitra na kibaombabaomba io. Aiza ka dia tonga ihany koa ny tsaho fa nisy nitifitra ihany koa ny fiaran'ingahy Jeneraly Sivily tsy menatra ny mametraka saina eo akaikiny rehefa raisim-peo sy alain'ny mpanao gazety sary izy sahala amin'ireny hoe izy indray no filoham-pirenena.
Moov : mbola mitohy ny olana
Dia hilaza aminareo ny zavatra voamariko amin'ity fiseraserana amin'ny alalan'ny moov mandoa sara mialoha ity indray aho. Saiky nisy ny fiovana kely nefa dia niverina indray ny fihisatry ny fifandraisana ny Zoma io. Ankevitry ny mandany 20 minitra hatrany aho nefa tsy mahasokatra takelaka toy ny voasakoany ao anatin'ny 10 minitra taloha. Nojereko amin'izay ny adiresy IP fa raha miovaova ny IP-n'ny mpampiasa aterineto (mpanjifa na client hoy isika) dia tsy miova fa ny laharana 192.168.1.1 hatrany kosa ny adiresy IP-n'ny server manolotra tolotra ho an'ny mpampiasa moov fandoa sara mialoha. Tsy fantatro aloha hoe mahazaka mpanjifa firy io server mety ho tokana ho an'ny manerana an'i Madagasikara io, sady tsy havanana loatra amin'ny reska sahala amin'itony aho fa mba mampahafantatra ny zavatra hitako fotsiny. Aleo ny manampahaizana no hamaly na hanazava amiko fa mba mila fanazavana mihitsy aho.
Ity fehezankevitra manaraka ity dia nasisika rehefa tsy tafiditra an-tserasera aho halina na dia niaretan-tory aza izany. Mikaonty tsara ny faharetam- potoana laniko manko aho. Teo amin'ny fikaontiana ary raha mbola tokony hanana fahefakadiny aho izany hoe eo amin'ny ora efatra latsaka fahefany indrindra no laniko ary handefa ity lahatsoratra ity aho no tapaka antenantenany ny fiseraserana an'aterineto. Miezaka aho ny hiditra fa tsy tafiditra intsony. Azo heverina izany fa ankevitry ny lany izany ny fahana izay tokony mbola hananako fahefak'adiny. Ny solosainako anefa tsy mety intsony raha ilay invite@carte.mg no kasaina hampidirana fahana. Nisy fotoana tany amin'ny cybercafé aho no nampiditra ny fahana, ary mbola nety izany tamin'izany fa izao kosa tsy nety intsony. Nanana olana aho izany ka nitady vahaolana vonjimaika. Mihevitra aho ny hamory izay manana olana rehetra amin'ny moov mba hifandray hidinika ny atao momba ny olana mahazo antsika, aelezo fa aleo mivondrona ny hery, na tena tsy tiako aza dia soratako ihany ny laharam-pindaiko azo iantsoana ahy : 261 33 11 292 52. Raha sanatria moa ka tsy voaraiko ny antsonao dia andefaso sms ihany.[Nisy nanendaka aho ka lasa any ny findaiko sy ny fakantsariko? Tsy afaka antsoina aho izany aloha.]
Fa inona no ambaran'ny lohateny?
Dia izay aho vao mitodika amin'ity natao lohateny, raha mandany fotoana kely isika (io manko no ao anatin'ny perikopa vakiana ao amin'ny fikambanan'ny mpiaramamaky ny baiboly eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia lasa lavitra kely ny saiko. Toa mampahatsiahy ny zavamisy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao indrindra manko ilay ao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany toko faha-28 raisina eo amin'ny andininy faha-14 ka hatramin'ny andininy faha-18, azo tohizana hatramin'ny andininy faha-22 fa dia afoheziko kokoa ilay izy. Mazava loatra fa misy amboariko kely ny filazako azy, nefa tsy hanimba velively ny hevitra raiketin'ny perikopa aho. Raha hamaky ny tena voalaza ao amin'ny baiboly ianareo dia tsy misy tsotra ankoatra ny mandray baiboly sy ny mamaky azy. Tsy maninona raha melohinareo ho manolana ny tenin'Andriamanitra aho fa ny anton'izany dia mba hifandraika amin'ny zavamisy eto Madagasikara ny resaka ho azon'izay tsy zatra mamaky baiboly rehetra ny tiako ampitaina:
Koa mihainoa ny tenin' YHWH ianareo ry mpivanitika mpitondra ity firenena eto Antananarivo ity.
Fa niteny ianareo hoe efa nahavita fifanarahana tamin'ny FAT, ary efa nifanaiky tamin'ny lavaka (fianjerana)
Ka hanao hoe na hisy aza ny sakoroka, dia tsy tonga aty aminay izany
Fa ampinga maharo anay ny lainga, ary fika fialanay bala ny mamorona videô [fa tsy ampiana hoe conférence]
Fa dia izao no lazain'ny Tompo YHWH
Hametraka vato ao Ziona aho, vato vita fisedrana, vato tsara,
azo atao vato fototra (fehizoro) satria vato tsara orina
Ka izay mifikitra aminy dia tsy ho voahozongozina.
Ny rariny no hataoko tady fanenjanana ary ny fahamarinana ho tsindry lentam-pahefana (ny sary hitako eto dia tahaka ny fitenintsika hoe flesy)
Ho faohin'ny [balan'ny] havandra ny lainga nataonareo hiarovan-tena ary ho lasan'ny riaka ny fika fiafenana.
Hofoanana ny fifanekenareo tamin'ny FAT
Tsy hateza ny fifanarahanareo tamin'ny lavaka fianjerana fa ho potika ianareo rehefa hifofofofo fiavy ny sakoroka
[hatreo ihany aloha]
Araka ny efa nolazaiko dia azonareo tohizana hatramin'ny andininy faha-22 io natsahatro tamin'ny andininy faha-18 io fa sao dia lazaina ho masiaka loatra aho raha manohy ny filazana azy. Azo fehezina amin'ny fomba fiteny malagasy manao hoe: "manao azy ho tratry ny aloka, kanjo tratry ny alok'akoho" io teny nomen'i Isaia mpaminany tamin'ny mpitondra firenena tsy miraharaha izay hatahoran'ny olona.
jentilisa 05 desambra 2009 amin'ny 01:46
Nifanafika ny samy mpivarotra [sary]
2009-12-02 @ 23:57 in Andavanandro
Raha sakoroka eo amin'ny mpivarotra sy ny polisin'ny kaominina tamin'ny ankapobeny no niheveran'ny maro tsy nahita ny zava-nitranga ny raharaha 2 desambra 2009 dia fifanenjanana teo amin'ny samy mpivarotra no nanamarika ny zavatra hitako teny Ambodifilao, Soarano, Behoririka.
Tsy nahita ny fanombohan'ny raharaha aho satria tsipalotra tamin'ny radio fahazavana nandritra ny fandaharana isa-maraina Vavolombelona no nahenoako hoe nisy sakoroka teny Soarano teny. Mpanara-baovao ny tena no sady tia mitatitra izay hita koa dia niolomay nankeny. Aleo manko mitantara toy izay itantarana sanatria toa tompon-trano mihono.
Tamin'ny 10:18 ny tena no tonga teny ka nanapika ny sary voalohany. Ireo fiara lehibe toa milahatra handray hazakaza-piarakodia nefa feno olona manatrika azy ireo no nahafantarako avy hatrany fa misy barazy eo anelanelan'ireo mpifanatrika ireo. Ny tena tsara andraisana sary dia teo amin'ny barazy mihitsy [miendrika arofanina] saingy mailo ihany aho ka naleo naka sary somary lavidavitra kely. Aza mihevitra fa vitsy kely ireo manakana ireo dia afaka ny ho fetsifetsy ny mpitondra fiara! Eo ny liana fotsiny nefa eo ihany koa ny anatin'ny tolona fa maka sisiny.
Nisy fiara fitaterana iray avy taty amin'ny ilan'ny tsenan'ny Pochard saiky hitsoriaka tamin'iny lalana iny saingy sioka be manadala sy horaka no nitsena azy. Niahanahana tampoka ny mpamily ny fiara ka naleony niolomay niverina tany amin'ny lalana nihaviany ihany. Na izany aza dia toa nisy famindram-po ihany nataon-dry zalahy tamin'ireo mpanamory soavalivy (môtô sy skotera) satria kodiaran-droa ireny fa tsy kodiarana efatra. Hita fa manakaiky ny toerana misy azy avokoa ny mpivarotra amoron-dalana hitako fa tsy namelatra ny entany amidiny kosa.
Mba nalalaka kosa ny lalana ho an'ny mpandeha an-tongotra fa sady tsy nisy ny mpivarotra amoron-dalana no tsy nisy koa ny fiara mpanelingelina. Raha izao moa no atao hoe androm-pirenena tsy ampiasana fitaovana mamoaka gaza karbonika?
tamin'ny 10:21. Nifampitadiavan'ny tompon'ny fiara rehetra amin'izay ny lalan-kiverenana fa toa tsy azo ifandaminana mihitsy ry zalahy nibahan-dalana tao. Tsy maintsy nizotra tany amin'ny lalana tsy azo aleha ny fiara rehetra nefa tsy misy bedy amin'izany. Iza kosa moa no hijanona handany andro eo? Hita ho karazan'ny voafandrika avokoa ny fiara nandeha afovoan-tanàna rehetra sady toa tsy maharaka ny fandehan'ny raharaha avokoa izy rehetra.
Tamin'ny 10:24. Mbola vitsy ihany no hitanao mitondra sora-baventy manao hoe "Miala ny jadona dia tsy refesimandidy". Sorabaventy natao maimaika ary nosoratana tamin'ny stylo fa tsy tamin'ny loko velively. Toy ny hoe nitroatra no fahita ireto olona ireto fa tsy hoe niomana ela. Ny reko tampoka teny antsefantsefany teny dia hoe aza misaraka amin'ny besinimaro loatra fa sao dia misy tsy ampoizina tampoka eo. Izany hoe nisy tahotra ihany tamin'ireto mpitolona ireto raha heveriny fa tafahataka amin'ny namany izy ireo.
Tamin'ny 10:26. Raha mbola feno fiara ity lalana ity dimy minitra lasa izay dia efa vitsy dia vitsy sisa ny fiara tazako tetoana ary fiara mijanona avokoa fa tsy fiara mandeha. Raha mahita fiara miloko volomboasary ny tapany ary fotsy ny tapany ianao dia tsarovy fa fiara mpivarotra hanimasaka ireny. Tsy nomena alalana hivarotra eny manko ry zareo raha tsy manao izay loko izay. Tokony ho fantatrao avy hatrany hoe iza moa no tompon'andraikitra nanao izay fanapahana izay.
Tsy hoe ny mpivarotra amoron-dalana rehetra dia nitokona tsy nivarotra ka nibahana ny lalana avokoa fa nisy dia nisy ny mpivarotra amoron-dalana tsy nanaiky hiara-dalana amin'izy ireo. Ny didin'ny be sandry sy ny maro an'isa anefa no nihatra ka dia lasan-dry zalahy ny entan'ilay mpiarotra amoron-dalana nitangoroanana teto anoloan'ny mpivaro-panafody teto. Nitabataba ilay lehilahy lasan'ny sasany ny entany hoe tsy mpitolona ianareo fa mpangalatra. Naverimberiny hatrany izany teniny izany. Nohorakorahan'ny hafa kosa izy tamin'izany teniny izany. Izany hoe tamin'ity fotoana ity dia mbola nandeha ihany ny "fifandresen-dahatra".
Marihina fa efa eo ampitan'ny Lisea Rabearielo io toe-javamisy io. Nandeha dia nandeha ny sioka sy ny kiririoka, mazava loatra fa tsy vanona ny fianaran'ny ankizy mpianatra saingy tsy navela hivoaka kosa izy ireo. Nandritra izany fotoana rehetra izany dia tsy nahita tamingana polisy sy ireo tovolahy karamain'ny kaominina handrava ny tsenan'ny mpivarotra amorondalana mihitsy aho. Efa nanakatom-baravarana kosa ny avokoa mpivarotra manana toera-pivarotana ara-dalàna rehetra. Heverina fa na fahamailoana no nahatonga izany na nisy nanery ny hanidy azy ireo mihitsy. Vao mahita fivialian-dalana amin'ny tsy lalan'ny mpitolona anefa ianao dia hahita mpivarotra misokatra ihany.
Tamin'ny 10:39. Nandroso nankeny Soarano ihany ireo mpilahatra, nanaraka azy ireo avy taty aoriana aho. Io fa mananontanona eo anoloan'ny Building... efa lasan'olon-kafa na dia mbola ny anarany ihany aza no ahafantaran'ny besinimaro azy ireo mpitondra sorabaventy. Hankaiza ny lalan'izy ireo? Iny fa hizotra hiditra ao amin'ny tsenan'ny Pochard. Nihevitra avy hatrany aho fa diso paika izy ireo. Tombontsoa mifanipaka ihany manko ny an'ny roa tonta ka tsy tokony hifanelingelina loatra. Efa manana fikambanana azy manokana manko ny mpivarotra ao anatin'ny tsenan'ny Pochard no efa anaty fefy rahateo ny fivarotan'izy ireo. Misy avy hatrany koa ny nihevitra fa tetika ampiadiana ny samy olona mihitsy no kinendry ao anatin'izao paika iray izao. Tsapako avy hatrany fa hisy sakoroka ihany koa eto.
Inona tokoa. Raha nihorakoraka tahaka ireny hoe ho tafiditra tao anaty tsena ireny ireo mpitolona dia nisyaloha ny fifanosehana teo ambavahady. Niala tany amin'izay ny fifampitorahana tapabiriky, vato, sezabory, seau sns... hazakazaka arahin-tosika ny an'ny mpanafika satria tsy nampoizin-dry zareo iny valibontana ay tamin'ny mpivarotry ny tsenan'ny Pochard iny. Nampaneno ny anjomarany avokoa ny fiara mbola nizotra tsimoramora tamin'iny lalana Ampanjaka Toera iny [anoloan'ny tsenan'ny Pochard mankeny anoloan'ny garan'i Soarano]. Teto izany dia olona samy olona mihitsy no nifampitoraka. Nadio vetivety ny teo amin'ny boulevard iray manontolo. Soa ihany fa tsy dia maro loatra ny zavatra azo nifampitorahana teto.
Nihemotra ny mpanafika. Nametraka fiarovan-tena vinaninany ny notafihina. Asa izay nanaraka ny vaovaon'ny TVM raha nahatsikaritra ny fifampitorahana miandahy miambavy nataon'ny andaniny sy ny ankilany fa tsy nisy fanazavana kosa aloha nataon'ny mpitantara. Izay teny Soarano no mahalala fa samy mpivarotra ireo nifampitoraka ireo.
Efa nivonona hamono lalana toy ny eto anilan'ny Magro Behoririka teto anefa ny CUA ho an'ireo mpivarotra amoron-dalana, efa vonona ny fefy saingy tsy nisy nankeny ihany ny mpivarotra amoron-dalana avy eo. Hatreo no hitako ka azoko tantaraina. Tamin'io fotoana io dia mbola tsy nisy Emmo-reg mihitsy teo amin'ny kianjan'ny 13 mey. Ny fitantaran'ny hafa moa no nilaza fa nandefasana baomba mandatsa-dranomaso ireo mpivarotra nitokona ireo raha nikasa hankeny amin'ity toerana ity. Tena toerana saropady tokoa ilay kianjan'ny 13 mey e! io ihany no arovana fatratra.
Nanome fampitandremana mialoha ny fanapahan-kevitra henjana ho an'ireto mpivarotra amoron-dalana ireto ny tao amin'ny Kaominina ny talata. Ny an'ny mpivarotra amoron-dalana no tonga aloha ka ny kaominina indray no nahazo fampitandremana. Nokaramainao ireo hanotrona ny fitokonanao tamin'ny voalohan'ny taona ka dia nampianarinao hivondrona. Tafavondrona tokoa ry zareo izao ka manana hery na dia tsy ara-dalàna aza. Toa taratry ny zavamisy eto Madagasikara ny raharaha satria ny tsy ara-dalàna izao no manjaka. Tianao mbola hiampy anarivony hafa ve ny olona mety hahavita zavatra tsy ampoizina miaro ny hany fivelomany kely? Dia tena sahiny tokoa ve ny handrava ny fifanarahan'ny AGOA manana mpiasa aman'aliny eto Madagasikara? Tsy mankasitraka velively ny ataon'ny mpivarotra amoron-dalana aho saingy heveriko ho manamarika ny tantaran'i Madagasikara ihany ity hetsika iray ity ho fampisainana ny mpanao politika tia manome fampanantenana poak'aty. Saingy ny tsy mpanara-dalàna ihany ve no mahay mivondrona sy mahavita toy izao fa ny mpanara-dalàna sy ny mpandala ny ara-dalàna kosa mba manao ahoana?
jentilisa 03 desambra 2009 amin'ny 02:02